Sababaha Dhabta Ah Taleefanka Muhiimka Ah Ayaa Qiimo Leh | Androidsis
Maalmo yar ka dib mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu soo jiidashada badan ayaa suuqa ka soo galaya shirkad gebi ahaanba cusub. Iyadoo ay waxaas oo dhami jiraan, Telefoonka Muhiimka ahi wuxuu noqon karaa mid si weyn u garaaca.
Andy Rubin waa mid ka mid ah magacyada ugu caansan taariikhda Android. Kahor intaanu mashaariic kala duwan ka bilaabin Aasiya oo aanu abuurin shirkad taleefankiisa gacanta, Rubin wuxuu ka mid ahaa agaasimayaasha Google Isla muddadaas, wuxuu sidoo kale mas'uul ka ahaa isbeddelka nidaamka hawlgalka ee hadda ku badan inta badan taleefannada casriga ah ee suuqa yaalla.
Maanta, magaca Andy Rubin wuxuu la mid yahay Telefoonka Aasaasiga ah, Qalab soo jiidasho leh oo isku dayaya inuu na tuso in Apple iyo Samsung oo keliya aysan lacag ku samayn karin terminal-dhamaadka sare. Qiimaha $ 700, Mobilada ugu horeeya ee shirkad cusub gabi ahaanba maahan maalgashi wanaagsan, laakiin agaasimaheeda guud ayaa noo sharxaya qoritaankii ugu dambeeyay ee blog waxa ay yihiin sababaha dhabta ah ee taleefankan casriga ah ee soo socdaa waa maalgashi muddo dheer soconaya.
Iyadoo rikoodh dheer ku leh horumarka Android, Rubin wuxuu ballan qaadayaa taas Telefoon kasta oo Muhiim ah oo lagu daahfuray magaca shirkadaada wuxuu ka faa'iideysan doonaa laba sano oo cusbooneysiin shaqeyneed iyada oo aan laga reebin iyada oo loo marayo noocyo cusub oo Android ah.
Intaa waxaa dheer, marka laga reebo haysashada noocyada ugu dambeeyay ee Android muddo labo sano ah, moobiillada ayaa sidoo kale heli doona balastarro dheeri ah oo ammaan ah oo Google ah. Haddii ay dhacdo in qofna uusan aqoon, isla shuruudaha iyo shuruudaha ayaa sidoo kale lagu bixiyaa Google Pixel kasta.
Laakiin tan ugu fiican ayaa ah taas Telefoonka Muhiimka ahi wuxuu qayb ka noqon doonaa nidaamka deegaanka. Dhowrkii biloodba mar ayaa lagu dhawaaqi doonaa qalab cusub, inta lagu guda jiro furitaanka mobilada waxaan lahaan doonnaa fursad aan ku helno a kamarad loogu talagalay duubista fiidiyowga ee 360.
Iyadoo maskaxda lagu hayo mabaadi'da suuqgeynta Mareykanka, aasaasaha Android wuxuu sidoo kale dhaleeceeyay dhaqannada suuqgeynta daran ee ay adeegsatay Samsung sannadihii la soo dhaafay. Isla safka waxaa ku jira Apple oo leh borotokoolladooda xiran oo aan kuu oggolaanayn inaad wadahadal ku dhex marto Facetime qof aan haysan iPhone.
Marka la soo koobo, Telefoonka Aasaasiga ahi waa taleefan aan la iska indho tiri doonin ka dib marka la soo saaro, laakiin soo saaraha ayaa mas'uul ka noqon doona inuu ku sii cusbooneysiiyo noocyada ugu dambeeya ee Android, waxaa jiri doona dhejisyo amni oo joogto ah iyo qalab cusub ayaa had iyo jeer loo sii deyn doonaa sii adeegsadayaasha sii socoshada madadaalo oo sii wad macaashka shirkadda.
Fuente: Muhiimka ah.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Sababaha dhabta ah ee Telefoonka Muhiimka ah ayaa mudan in la iibsado
Su’aal CAMERA MA LAGA HELI KARAA?
Jawaab Angel GH
Telefoon kale oo xad-dhaaf ah oo farabadan oo ku nool haybadda abuureheeda ... sida Pixel oo kale.
Jawaab Josué Cgc